ရှမ်းမြောက်တွင် ဆက်ကြေးကောက်နေသော SSPP/SSAတပ်ဖွဲ့ဝင် (၂)ဦး ဖမ်းမိ ~ Myanmar Forward
ရှမ်းမြောက်တွင် ဆက်ကြေးကောက်နေသော SSPP/SSAတပ်ဖွဲ့ဝင် (၂)ဦး ဖမ်းမိ
Posted by drmyochit Sunday, June 15, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးမြောက်ဘက် ကျေးရွာများတွင် ဆက်ကြေးကောက် နေသော SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးအား ဇွန်(၁၃)ရက်နေ့တွင် နယ်မြေခံတပ်မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ယင်းဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးမြောက် ဘက် နောင်ပစ်ရွာနှင့် ပန်မလွတ်ရွာကြားတွင် ဆက်ကြေးကောက်သော SSPP/SSA အဖွဲ့ဝင်များ သွားလာနေသည်ဟု ဒေသခံရွာသားများ၏ လာရောက်သတင်းပေးချက်အရ နယ်မြေခံအစိုးရ တပ်မှ ညနေ(၅)နာရီခန့်တွင် ၄င်းရွာနှစ်ရွာကြား၌ ယင်းတပ်ဖွဲ့ဝင် (၂)ဦးအားစောင့်ဆိုင်း ဖမ်းဆီး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နယ်မြေခံတပ် မှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်(၂)ဦးမှာ တပ်သားအဆင့်ရှိ သူများဖြစ်ကြသော ကောလိယ(၄၀)နှစ်၊ ရှမ်း/ဗုဒ္ဓ ပန်မလွတ်ကျေးရွာ၊ နောင်ချိုမြို့နယ်နှင့် ထွန်းရွှေ(၂၃)နှစ်၊ တရုတ်/ဗုဒ္ဓ၊မင်းကုန်းကျေးရွာ၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
`` သတင်းရတာကြာပါပြီ၊ ရွာသားတွေလည်းကြောက်တော့ ဆက်ကြေးပေးနေရပေမယ့်လာမတိုင်ရဲကြဘူး၊ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဆက်ကြေးကောက်မယ့်အဖွဲ့ လာတယ်ဆိုပြီး သတင်းရတာကြောင့် ပန်မလွတ်နဲ့ နောင်ပစ်ရွာကြားမှာ စောင့်ပြီးဖမ်းခဲ့တာ ပါ´´ ဟု နယ်မြေခံတပ်မှ တပ်ရင်းမှူးကပြောသည်။
အဆိုပါဖမ်းဆီးရမိသူ (၂)ဦးမှာ SSPP/SSAအဖွဲ့က ဟု ၀န်ခံထွက်ဆို ထားပြီးဖြစ်၍ SSPP/SSA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် များအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုယူပြီး နောက်ကွယ်တွင် ယခုလိုဆက်ကြေး ကောက်ခံနေမှုများအတွက်ထိ ရောက်စွာဖြေရှင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း နောင်ချိုမြို့နယ် လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးက ဆိုသည်။
`` ဒီနယ်မြေတွေမှာ ဆက်ကြေးကောက်တာ ရပိုင်ခွင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ၊ SSPP/SSAအဖွဲ့က လာကောက် တာအကြိမ် ပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူး၊ အခုမှသာ နယ်မြေခံတပ်ရင်းက ဖမ်းမိလို့ ဆက်ကြေးကောက်တာပေါ်တာပါ၊ သူတို့ခေါင်း ဆောင်ပိုင်းက ဘယ်တော့မှ ၀န်မခံပါဘူး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့် သဘောတူညီမှုတွေကို လေးလေးစားစား လိုက်နာဖို့တော့ လိုတာပေါ့´´ဟု ၄င်းက ပြောကြား သွားသည်။
Credit To စိုင်းမင်းလတ်‬(နောင်ချို)
အီတလီကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ ဆီရီးယားကနေ ပြောင်းရွှေ့အ...
ရှမ်းမြောက်တွင် ဆက်ကြေးကောက်နေသော SSPP/SSAတပ်ဖွဲ့ဝ...
ကင်ညာနိုင်ငံသားတို့၏ အချစ်တော် ဆင်ရိုင်းကြီး ဆင်စွ...
အာဖရန်နစ္စတန်သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးခဲ့တဲ့ လူ ၁၁ ဦ...
စင်ကာပူရောက် မြန်မာအိမ်အကူကို နှိပ်စက်သည့် နိုင်ငံ...
ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စတွေက သင်တို့ရဲ့အချစ်ရေးကို ပျက်စ...
Blood pressure and Anemia သွေးအားနည်းတာနဲ့ သွေးဖိအ...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တစ်ဦးကို တစ်လလျှင် ကျပ်ငါးသော...
စစ်ကိုင်း ဇေယျာသီရိ ရုပ်ရှင်ရုံဝင်း အတွင်း လူသေ အေ...
Pengertian Withdraw dan Deposit Bola Online - Pengertian Withdraw dan Deposit Bola Online – Siapa sih yang tidak kenal dengan permainan judi Bola Online ini? Didalam permainan judi bola yang ada di Sit...
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ပြည်သူများ ပူးပေါင်းကူညီပေးရန်လိုအပ်ဟု မင်းတပ်ခရိုင်ရဲမှူးပြော - By Ling Hung Leng – ချင်းပြည်နယ်၊ မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတော်မှထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲဥပဒေများ လိုက်နာလာရန်အတွက် ဒေသခံပြည်သူမျ...
ကရင်ဇာတ်သဘင် အဆင့်မြင့်မားလာစေရန် သဘင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်သွားမည် - ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။ စောရှား ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဇာတ်သဘင်အဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားရန်ရည်ရွယ်၍ ကရင်သဘင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ဖားအံမြို့၊ ချစ်သူ...